“Juventus Waxay Muujisay In Real Madrid Looga Adkaan Karo Santiago Bernabeu” – Gool FM
“Juventus Waxay Muujisay In Real Madrid Looga Adkaan Karo Santiago Bernabeu”
(Bayern Munich) 30 Abriil 2018. Jupp Heynckes ayaa ka hadlay kulanka ay Real Madrid isaga hor imaan doonaan lugta labaad wareega afar dhamaadka tartanka Champions League haroonka Santiago Bernabeu.
Tababaraha kooxda Bayern Munich ayaa wuxuu kasoo muuqday shir jaraa’id, kahor kulanka Real Madrid, waxaana shirkiisan jaraa’id ku wehliyay xidigaha Thomas Muller iyo James Rodríguez. Wuxuuna xaqiijiyay in kulanka bari ay si xoogan ugu diyaar garoobeen.
Jupp Heynckes ayaa sheegay in Bayern Munich ay ku garaaci karto Real Madrid in ka badan laba gool, iyadoo uu tilmaamay in kulankii ay la ciyaareen Juventus ay cadeen fiican u noqoneyso.
Si kastaba Real Madrid ayaa habeen dambe garoonkeeda Santiago Bernabeu kusoo dhaweyn doonta kooxda Bayern Munich oo kulankii lugta hore ee Allianz Arena ay kaga soo adkaatay 2-1, waxaana la sugi doonaa natiijada kulankan iyo kooxda u gudbi doonta finalka magaalada Kiev ee dalka Ukraine.
"Labo gool oo garab dhaaf ah ayeey naga dhaliyeen xiliciyaareedkii hore" - Muller oo weeraray Real ka hor kulanka habeen dambe